Gịnị na-eme ma ọ bụrụ na lubrication mgbe ada ada n'oge na-ewu? - China Qingdao CO-NELE Group
Ekwentị: + 86-18306398869
Concrete ọganihu mgbapụta Truck
Trailer Concrete mgbapụta
Obere Fine Stone mgbapụta
Concrete igwekota mgbapụta
Concrete ịtụkwasị ọganihu
Osisi nke Batrị
Gịnị na-eme ma ọ bụrụ na lubrication mgbe ada ada n'oge na-ewu?
Concrete mgbapụta gwongworo na-n'ọtụtụ ebe na isi ewu na saịtị. Ịmụta nanị dozie lubrication ebe ọdịda n'oge ewu nwere ike mma n'ụzọ dị ukwuu na-ewu arụmọrụ.
The lubrication uche nke ihe mgbapụta ụgbọala mgbe niile kwesịrị ịnọgide na-enwe ọrụ nke lubrication. Ọ bụrụ na a kpatara emee, ọ ga-emetụta ndị nkịtị na-enwe ọganihu nke ndị na-ewu, ma ọ bụghị nanị na nke a nwere ike ime ka n'ibu-eyi. Ya mere, otú a na-na lubrication ebe ọdịda nke ihe mgbapụta ụgbọala n'ozuzu mere n'oge na-ewu? Kpọmkwem, e nwere ihe atọ a:
1. The ntuziaka lithium dabeere griiz mgbapụta bụ ezighị ezi;
2. The mgbawa mmanụ separator akpọchi ma ọ bụ mebiri emebi;
3. One ma ọ bụ karịa ihe ndị lubrication isi nke buru ibu ma na obere na-amị nkanka na-akpali aro aka uwe na-egbochi.
N'ihi na n'elu mgbapụta ụgbọala lubrication ebe ọdịda, ndị na-esonụ ngwọta na-ejikarị:
1. Wepụ griiz tinyekwa ígwè anwụrụ nke griiz mgbapụta, na mgbe ahụ na ịma jijiji na-etekwa mgbapụta. Ọ na-achọta na-etekwa mgbapụta nwere ike na-ejikarị na-emepụta griiz na nwere ike mfe maa jijiji, na-egosi na ọ dịghị nsogbu na-etekwa mgbapụta
2. ebukọtala na lubrication isi nke buru ibu ma na obere na-amị oche na-akpali aro uwe iji. N'oge disassembly usoro, ma ọ bụrụ na ọ na-hụrụ na a na-lubrication mgbe a na-ewepụ, mgbe ahụ, griiz mgbapụta nkpatu na-arụ ọrụ kwesịrị, ọ na-ekpe ikpe na lubrication mgbe a na-egbochi.
Post oge: Mar-10-2020
Mmadụ Bịa na kpaliri bob@conele.com maka ozi ndị ọzọ
Adress: TIEQISHAN OKPOROỤZỌ 413, CHENGYANG District, 266107, Qingdao, Shandong, CHINA
Ekwentị / Whatsapp: + 86-18306398869
Re ahịa ndị Konecranes na mgbe a gbasara sal…
Kedu ihe dị iche n'etiti gwongworo pump ...
Isi dozie olu nke ihe mgbapụta t ...
Mgbe ihe mgbapụta ụgbọala na-dọwara f ...
Gịnị na-eme ma ọ bụrụ na lubrication mgbe ada ada ...
Celia: Ndewo, Nabata ileta weebụsaịtị anyị. Alala azụ ịkpọtụrụ anyị
Celia: Kedu igwe ịchọrọ?
Ọ dịghị Ekele Chat Ugbu a